Maitiro Ekuvhara Mapurogiramu PaApple Tarisa: Iyo Chaiyo Nzira! - Apple Tarisa
iphone 6 kumberi kamera nhema screen
maitiro ekuvhura maviri factor chokwadi apple
maitiro ekubatana neApp Store pane iphone
sei iphone yangu ichipenya
Maitiro Ekuvhara Mapurogiramu PaApple Tarisa: Iyo Chaiyo Nzira!
Iwe une akawanda maapplication akavhurwa pane yako Apple Watch uye iri kutanga kudzora zvinhu pasi. Iwe unoda kuvhara kunze kweako Apple Watch maapplication, asi iwe hauna chokwadi kuti sei. Muchikamu chino, ndichakuratidza maitiro ekuvhara maapps pane yako Apple Watch !
Maitiro Ekuvhara Mapurogiramu PaApple Watch
Kutanga, tinya bhatani rerutivi kurudyi rweApple Watch yako. Paunoita, iwe uchaona runyorwa rweese maapplication arikuvhurwa parizvino pane yako Apple Watch.
Paunowana Anwendung yaunoda kuvhara, Rova zvakasimba pairi kurudyi-kuruboshwe. Mushure mekutsvaira, bhatani reBvisa richaonekwa. Tinya iyo Bvisa bhatani kuti uvhare iyo app!
Nei Ndichifanira Kuvhara Mapurogiramu PaApple Watch Yangu?
Izvo zvakakosha kuvhara maapps pane yako Apple Watch, kunyanya kana iwe waona kuti yako Apple Watch bhatiri inofa nekukurumidza. Zvirongwa zvakasara zvakavhurika zvinoramba zvichimhanya kumashure uye dzimwe nguva kupunzika, izvo zvinogona kunyatsoisa zvinhu pasi pane yako Apple Watch.
Ndicho chikonzero isu takasanganisira 'kuvhara maapplication ausiri kushandisa' mune yedu runyorwa rwe gumi nematanhatu Apple Tarisa bhatiri matipi !
Zvimwe ZveMudzidzi Anoona?
Kana iwe uri wekudzidzira kuona, tarisa yedu YouTube vhidhiyo pa maitiro ekuvhara maApple Watch maapp ! Dzidziso yedu inongoita 37 masekondi kureba, saka unenge uri kuvhara Apple Watch maapplication pasina nguva.